हाम्रो खुसी ग्राहक
डा। शेपिन र उनको टीमलाई पेशेवर सेवाहरूको लागि धन्यवाद। उनीहरूले हाम्रो मागहरू ध्यानपूर्वक सुन्नेछन्, उनीहरूको ठोस व्यावसायिक ज्ञानको साथ। यो समयमै प्रतिक्रिया यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि हामी केसलाई समयमै पास गर्छौं। सिफारिस लायक!
मालिक | आप्रवासन वकिल
एन्ड्रयू र उनका स्टाफसँग इमिग्रेशन समुदायले नयाँ व्यवसाय खोल्ने सम्बन्धमा सामना गर्ने मुद्दाहरू र चुनौतीहरूको बारेमा उत्कृष्ट समझ छ। एक व्यापार योजना को तयारी गर्न को लागी उनीहरुको दृष्टिकोण सरल तर प्रभावी छ। कार्य उत्पादन उत्कृष्ट छ र यसले मेरो अपेक्षाहरू र मेरो ग्राहकको पार गर्यो। अत्यधिक सिफारिश गरिएको!
अटर्नी / पार्टनर प्रबन्धन गर्ने
एन्ड्र्यू वित्तीय समझको मामलामा काम गर्न अद्भुत छ। व्यापार योजना ड्राफ्टिंगका लागि उत्कृष्ट; कडा श्रम र ग्राहकहरु को लागी यथार्थवादी र चलाख वित्तीय उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। म एन्ड्र्यूको बीपी ड्राफ्टि services सेवाहरू र वित्तीय योजना / सल्लाह प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु।
व्यवसाय अध्यागमन र सम्झौता अधिवक्ता
हाम्रो कार्यालय एन्ड्रयू र उनको टीम द्वारा प्रदान कडा परिश्रम र अनुकरणीय सेवा को लागी आभारी छ। तिनीहरूले केवल हाम्रो ग्राहकहरूलाई हाम्रो अपरेसनहरू व्यवस्थित गर्न र राम्रोसँग मद्दत गर्दैनन् तर हामीलाई कडा र छिटो मद्दतको साथ प्रदान गरे हामीलाई केस अधिक प्रभावकारी ढ complete्गले सम्पन्न गर्न मद्दत गर्न। हामी दृढ रूपमा उहाँको सेवा सिफारिस गर्दछौं।
एन्ड्र्यू आफ्नो काम उत्पादन मा समय र समय फेरि दर्शनीय साबित भएको छ। हाम्रो ग्राहकहरु अनुमोदित छन् र हामीले कहिल्यै पनि व्यापार भिसाका लागि थप जानकारीको लागि RFE प्राप्त गरेका छैनौं। एन्ड्रयू सधैं ग्राहकहरु का लागी प्रश्नहरुको उत्तर दिन उपलब्ध छ र सँधै बिरामी र पेशेवर छ। हामी निश्चित रूपमा उनीसँग काम गर्न जारी राख्दछौं, विशेष गरी यो वर्ष हामी हाम्रो व्यवसाय अध्यागमन खण्ड विस्तार गर्दैछौं।
ग्राहक एस टिराना, अल्बानिया मा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा अनुमोदित भएको थियो। E-2 लगानीकर्ताको भिसा प्राप्त गर्न सजिलो कन्सुलर कार्यालय होइन! म विश्वस्त छु कि यस मामिलामा हाम्रो सफलता तपाईको त्रुटिपूर्ण तयारीको लागि योजना बनाएको हो। मेरो ग्राहक र मेरो तर्फबाट, धन्यवाद!
म एन्ड्र्यूलाई जो कोहीलाई उत्कृष्ट व्यापार योजनाको आवश्यकता छ सिफारिस गर्दछु। म एक वकील हुँ र मेरो ग्राहकहरु को लागी एक ड्राफ्ट गर्न एक व्यापार योजना को आवश्यक छ। धन्यबाद म एन्ड्रयूलाई पठाइएको थियो जसले मलाई कुनै समय बिना नै विस्तृत र विस्तृत योजना प्रदान गरे। एन्ड्र्यू संग काम गर्न धेरै सजिलो र धेरै उत्तरदायी थियो। उनले योजनामा ​​धेरै काम हाले र प्रतिज्ञा गरिएको समय भित्र पुर्‍याए। म उनीले प्रदान गरेको सेवाबाट धेरै खुसी छु र भविष्यमा निश्चित रूपमा उनलाई प्रयोग गर्दैछु।
क्रिस्टम्यान कानूनी IigigLaw
अनुगमनको लागि धन्यवाद! आवेदन अनुमोदित भएको थियो र सबैजना धेरै खुसी थिए।
कानून मा अधिवक्ता
म योजना आप्रवासन धन्यवाद दिन चाहन्छु। सही कम्पनीसँग काम गर्नका लागि खोजी गर्न मैले धेरै समय खर्च गरें। म अन्तिम परिणाम, व्यावसायिकता, र एन्ड्र्यूको बुद्धिमानी सल्लाह संग धेरै खुसी छु।
माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टर
मलाई आशा छ कि यो ईमेलले तपाईलाई राम्रो फेला पार्नेछ। म तपाईंलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि दुबै E2 केस तपाईंले तयार गर्नुभयो, स्वीकृत भएको थियो। तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद।
संस्थापक र सीईओ
श्री एन्ड्र्यू शेपिनसँग काम गर्न पाउनु साँच्चिकै खुशीको कुरा हो, उहाँसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता र ज्ञानले हामीलाई एक उत्तम व्यापार योजना र रणनीति स्थापना गर्न मद्दत गर्‍यो। मैले धेरै सिकेको छु र अनुभवबाट रमाईलो भएको छु।
क्यामिलो ए। क्याब्रेरा जी।
म योजना आप्रवासन धन्यवाद दिन चाहन्छु। सही कम्पनीसँग काम गर्नका लागि खोजी गर्न मैले धेरै समय खर्च गरें। म अन्तिम परिणाम, व्यावसायिकता, एन्ड्रयूको बुद्धिमानी सल्लाह संग धेरै खुशी छु। ऊ वास्तवमा एक हो जसले ग्राहकको फाइदा / फाइदा दिमागमा काम गर्दछ।
VIP ट्रेडिंग LLC
म केवल मेरो I-129 को लागी USCIS स्थिति जाँच गर्दछु र यसको अनुमोदित भएकोमा खुशी छु। मैले तपाईंलाई धन्यवाद भन्नु पर्दछ। ।
एन्ड्र्यूसँग काम गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो र मैले उसलाई मेरा साथीहरू र सहयोगीहरूलाई सिफारिस गर्न कुनै हिचकिचाउँदिन। एन्ड्र्यू एक अद्भुत, पेशेवर काम गरे र एक महत्वपूर्ण फाइलिंग को लागी मेरो व्यापार योजना समय मा पक्का गरे।
तपाईं संग काम अनुभव धेरै राम्रो छ! तपाईंले लेख्नुभएको लेख उत्कृष्ट छ, र सेवा अति उत्तम छ! वास्तवमा तपाईले यो अपेक्षा गरेको भन्दा चाँडो गर्नुभयो। लेखहरू धेरै राम्रोसँग लेखिएको थियो, धेरै कुशल, प्रथम श्रेणीको सेवा।
साझेदार प्रबन्ध गर्दै
विदेशी लगानी र व्यापार योजना गर्न आउँदा एन्ड्र्यू एक सबैभन्दा ज्ञानी र दक्ष पेशेवर हो। वित्तीय / सम्पत्ति व्यवस्थापन क्षेत्रमा एन्ड्रयूको विशाल अनुभवको साथसाथै उसको विश्वव्यापी दृष्टिकोण कुनै पनि संस्था वा व्यक्ति उसलाई भाडामा लिन खोज्नेहरूको लागि ठूलो मूल्य साबित हुनेछ।
Veritec वित्तीय प्रणाली, Inc.
"म हाम्रो व्यवसाय योजना तयार गर्न हामीसँग काम गरेकोमा योजना आप्रवासनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अन्तिम परिणाम संग खुशी छु। तिनीहरूको शुल्क धेरै उचित छ "
योजना इमिग्रेसनको साथ काम गर्ने मेरो अनुभव धेरै सकारात्मक थियो। तिनीहरूको व्यावसायिकता स्फूर्तिदायी थियो र म तिनीहरूलाई सिफारिस गर्ने अवसरलाई स्वागत गर्दछु। व्यापार योजना लेखन प्रक्रियाबाट भार हटाउनुभएकोमा धन्यवाद।
आन्द्रे शेपिन हाम्रो लागि सिफारिस गरिएको थियो। तुलनाको लागि, इन्टरनेटमा समान कम्पनीहरूको धेरै साइटहरूको समीक्षा गरियो। हामी planimmigration.com मा रोक्यौं र हाम्रो छनौटमा कहिल्यै पछुताएनौं। यहाँ पेशेवरहरूले काम गर्छन्, जसले कठिन र गैर-मानक कार्यहरू गर्छन्। र यो परियोजनाको जटिल जस्तो लाग्न सक्छ, तपाईलाई थाँहा छ कि एन्ड्रेसँगै इष्टतम समाधान भेट्टाइनेछ र कार्यान्वयन हुनेछ। म यस व्यक्तिको इमान्दारी, शिष्टता, दक्षता र धैर्यलाई आफ्ना ग्राहकहरूको लागि नोट गर्न चाहन्छु। एन्ड्रे शेपिनले हाम्रो सपना वास्तविकतामा महसुस गरे। धेरै धन्यवाद र तपाइँ र तपाइँको टीम को लागी रचनात्मक सफलता। तपाईलाई शुभकामना म सबैलाई सिफारिस गर्दछु जो सफल हुन चाहन्छन।
मँ तिमीलाई खुशीको खबर दिन चाहन्छु कि मेरो भिसा को लागी मेरो साक्षात्कार थियो र तपाइँलाई यो बताउन खुसी छु कि मेरो भिसा स्वीकृत भएको थियो र ५ बर्ष को लागी! म बिल्कुल रोमाञ्चित छु! ब्यापार योजना को लागी तपाइँको प्रयास को लागी धन्यवाद। यो यहाँ र त्यहाँ एक थोरै गाह्रो थियो हामी जान्दछौं, तर मँ कदर गर्दछु तपाइँ यसको साथ रहनु भएको छ र यसलाई सही प्राप्त गर्न को लागी प्रयास जारी राख्नुभएको छ। हामी त्यहाँ अन्त मा पुग्यौं! तपाइँलाई धेरै राम्रो बधाई छ र एक महान परिणाम को हिस्सा हुन को लागी फेरि धन्यवाद!
पुस्तकको बारेमा भनिरहेको छ
यो बिक्री बेच्न को लागी सुरक्षा वा खरीद सुरक्षा को लागी एक प्रस्ताव को प्रस्ताव छैन। कुनै पनि प्रायोजित परियोजनामा भाग लिन कुनै पनि प्रस्ताव केवल मेमोरान्डम लेखन गर्न सकिन्छ। एक प्रायोजित परियोजनामा कुनै पनि बिक्री एक उपराष्ट्रिय राष्ट्र द्वारा सब्सक्रिप्शन एग्रीमेन्ट द्वारा प्रमाणित गरिनेछ र विस्तारित आवेदनको लागि, संस्थाको संस्थाको औपचारिक र बाहिरी भागमा प्रदान गरिनेछ। कानून र न्यायाधिकार कानून जहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ।
२१7२० डब्लु। लांग ग्रोभ आरडी।
डियर पार्क, #C209, आईएल 60010, संयुक्त राज्य अमेरिका